SAKOROKA TETSY VONTOVORONA : Mitaky ny hampiakarana 100% ny fampitaovana ny mpianatra | NewsMada
Miverina indray ny korontana tety Vontovorona.
Raikitra ny tora-bato nataon’ny mpianatra teny Vontovorona, omaly. Fampiakarana 100%-n’ny fampitaovana sy fampidinana saram-pisoratana anarana no tena votoatin’ny fitakian’izy ireo. Nafanafana indray ny teny an-toerana…
Toerana ifandimbiasana! Taorian’ny sakoroka teny Ankatso, ny herinandro lasa iny, anjaran’ny mpianatry Polyteknika Vontovorona indray, omaly. Raikitra ny torabato sy horakoraka nanehoan’izy ireo ny fahafaliany momba ny resaka fampiakarana 100% ny fampitaovana sy ny fampidinana ny saram-pisoratana anarana, izay midangana dia midangana tokoa. Feno ny kapoaka teo amin’izy ireo ka izao niafara tamin’ny fidinana an-dalambe izao ny raharaha. Raha ny fanamarihan’ireo mpianatra nitokona omaly, efa an-taonany maro no tsy niakatra ny fampitaovana, izay zara raha 66.000 ariary fotsiny. Izay no antony nangatahana ny fampiakarana ho 100%. Ny vidim-piainana anefa, tsy mitsaha-miakatra hatrany, ny sandam-bola malagasy tsy mitsaha-midina. “Tsy maintsy nirosoana izao fitokonana izao mba hahatsapan’ireo tomponandraikitra ambony eto amin’ny firenena fa tsy rariny intsony ny zava-misy setrain’ny mpianatra eto anivon’ny Anjerimanontolo. Faralahin’olona hatrany izahay, kanefa ny mpianatra ety amin’ny Oniversite no kitro ifaharan’ny fampandrosoana satria izahay no hitantana ny firenena rahatrizay”, hoy ny fanehoan-kevitr’izy ireo.
Nisy ny fifampiraharahana
Tsiahivina fa midangana dia midangana ny saram-pisoratana anarana alaina amin’ireo mpianatra eny anivon’ny Anjerimanontolo, tahaka ny eny Vontovorona. Mahatratra 100.000 ariary no alaina amin’ireo mpianatra manomana ny “licence”. Manoloana ireo fahasahiranana maro samihafa, efa mila tsy ho takatry ny ray aman-drenin’ny mpianatra ny fanefana azy io, manginy fotsiny ireo vola madinidinika, mbola tsy maintsy efaina. Nisy ihany ny fifampiraharahana teo anivon’ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny solontenan’ny mpianatra, mba handinihana sy hikaroham-bahaolana momba izao fitokonan’ny mpianatra izao. Milaza ny mbola hanohy ny hetsika ireo mpianatra raha tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin’ny fitondram-panjakana. Tsiahivina fa nikatona avokoa ireo toeram-pivarotana teny an-toerana nandritra ny fitokonan’ny mpianatra.